Garoonka Muqdisho &Magareeshinka Muqdisho oo hareeye Masuq maasuq Xoogan - iftineducation.com
Garoonka Muqdisho &Magareeshinka Muqdisho oo hareeye Masuq maasuq Xoogan
aadan21 / July 31, 2012
Maalmo badan aan isaga daba laabtay Magareeshinka muqdisho ayaa ku arkay waxyaabo siweyn u hareeye magareeshinka ay kamidyihin Afaar5 qabiilnimo iyo masuq maasuq xoogan kuwaasi oo ku kacayaan shaqsiyaad kahowl gala iyo Agaasimayaasha.
Xaru7ma waa weyn oo laga dhisay jiingado ayaa durbadii ishaada kudhaceysaa iyo askar aan laheyn wax aqlaaq iyo heegal dowladeed waxaana ku muuqaneyso dadweyne siweyn ugu tactareesan xarunta Magareeshinka oo sugaayo qaadashada baasabor cusub ame xareyntiisa.
Dadka dhan waa cabadayaan waxaana kasoo yeereyso meeshaan shaqo kama socoto blse waxa arkeysaa dad si hoos hoosey kusii aruuraayo xaruntaasi oo lagu dhufanaayo Masawiro ame qaadanayaan Baasabor.
Dadka qaar aya kushegaayo in aan meeshaan kasocon shaqo cadaalad iyo nidaam dowladeed kudhisan blse ay kasocoto shaqo masuq maasuq iyo mid afaaro qabiilnimo waxaana dadka kuweydinayaan in aad tahay beesha murusade oo haatan ladaala dhaceyso Maamulka Magareeshinka.
Shaqaalaha kahowl gala magareeshinka aya wajiyadooda dhan kamuuqata xanaaq iyo dabeecad xumo waxaana jirin qof kula hadlaayo ame kusaacideynaayo wallow goorta aad kadhawaajiso in aad bixineyhso shaax sidii maalin Ciidaad kugu farci doono.
Hadal majiro ilaa aad lasoo baxdo taleefonkaada kasoo oo aad ksoo direysid Lacagta loo yaqaano E-VC Plus oo ad adeyg cusub lacag diris ay keentay shirkada Hormuud Telecom.
Waxa aan kabadalneyn xaalada kajirta Magareeshinka muqdsho Garoonka Aadan CAdde oo agaasime kawada yahe General Gaafow oo heeb ahaan kasoo jeeda beesha aan kor kusoo xusnay waxaana arkeysaa shaqo xooli kusocoto blse ay hageyso dhaqaalo ame ina adeer.
Askarta taagan afaafka hore Garoonka aya siweyn u qaata dhaqaalo hadiiba aad galeyso garoonka kuwaasi oo kushjegayaan in garoonka ladiiday in lagalo marka laga reebo qofka baxaayo.
Waxa maalin maalinta kadanbeyso sii xoogeyste dhaqaalaha ay qataan kasoo yaraan jire blse xiligaan cirka isku sii shareeraayo lana qaato 100$
Waxa sii laba jubaarmay lacagihii laga qaadi jiray dadka usocdaalaayo Wadanka xiligaani sida hagar la aanta noogu soo gurmaday ee Turkiga waxaana laga qadaa 500$ oo aan laga dhaafin dadka usocdalaayo marka laga reebo dadka kuheybta General Gaafow oo waraaq soo siiyo.
Isku sowada Duub Shacabkii soo doontay Baasaborkaan aan ictiraafka fog aan laheyn sidaani loo galaayo iyo muwaadinkii somaliyeed garoonkiisa laga xadidaayo laguna baacinaayo qori Amankiisa aan xirneyn Maxaa lo0o yiri waa laga gudbay xiligii Qabiilka iyo quruinkiisi mise Madaxda qaranka Maba arkaan Cadaalad darida Gaaafow iyo Ehelkiisa labadaasi xarumood kula kacayaan.
Marshaale oo lagu dilay Muqdisho : xigasho bbcsomali.com